युगसम्बाद साप्ताहिक - नेपालको भविष्य
Sunday, 04.05.2020, 09:52pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 01.23.2012, 03:01pm (GMT+5.5)
नेपालको भविष्य दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सत्ता राजनीतिको विकारले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्नसक्ने आशङका खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच पुलको काम गर्न नसके नेपाल तीमध्ये एउटा देशमा विलय हुनसक्छ भनेर भय प्रवाह गर्नुभएको छ । वर्तमान विश्व सन्दर्भमा नेपाल जस्तो एउटा स्वतन्त्र मुलुक अर्को मुलुकमा सहजै विलय हुने कुरा कथित विद्वान डा. भट्टराईको दिमागमा कसरी उब्जियो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । निकट अतीतकै कुरा कोट्याउने हो भने सत्ता स्वार्थमा डुबेको लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर भारतले स्वतन्त्र सिक्किमलाई चार दशक अगाडि आफ्नो देशमा विलय गराएको थियो । उति बेलादेखि नै नेपाल उसको अर्को लक्ष्य हो भन्ने अनेकथरि चर्चा परिचर्चा हुने गरेका थिए । समयक्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनमा भारतको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्ने कसरत हुँदै आयो र त्यसको परिणाम पनि देखियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको नांगो हस्तक्षेपलाई सहज र स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्नेहरू नै यो मुलुकका हर्ताकर्ता बन्ने परिपाटी विकसित भयो । अहिले नेपालमा भारतकै पहलमा बनेको सरकार अस्तित्वमा छ भन्ने जगजाहेर नै छ । त्यही सरकारका प्रमुखले देश विलयको अनपेक्षित प्रसंग उठाउनुको अन्तनिर्हित कारण के हो ? कुन आशयले यस्तो अवाञ्छित धारणा प्रवाहित गरिएको हो ? के यो भारतीय धारणाको प्रतिबिम्बन हो ? एक पछि अर्का प्रश्नहरू लाम लागेर खडा भएका छन् ।
हाम्रो देश नेपाल दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र हो । हाम्रै छिमेकका विशाल देशहरू परतन्त्रको चंगुलमा परेको बेलामा पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक सत्ता अक्षुण रहेको गौरवमय इतिहास छ । यो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि दागाधर्नेहरू बिरुद्ध अतीतमा हाम्रा पुर्खाहरू दह्रोसंग उभिएर कठिनाइको सामना गरेकाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको गौरवमय गाथा हामीसित छ । तर वर्तमानमा आएर सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बन्धकीमा राखेर आस्था र विचारको क्रय–विक्रय गर्ने राजनीतिक सौदावाजहरूकै कारण नेपालको राष्ट्रियता धरापमा पर्दैगएको पीडादायी आभास बढ्दै गएको छ । परिवर्तित वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्र अस्तित्व नै कायम गर्न नसक्ने र कतै विलय हुनसक्ने जस्ता नितान्त निषेधित र मुढाग्रही धारणा समेत सुनियोजित रुपमा प्रवाहित हुन पुग्नुले देश कति संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ भन्ने यथेष्ट संकेत गरेको छ । देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएका सरकार प्रमुखकै यस्तो गैरजिम्मेदार कथनको अन्तनिर्हित कारण के हो ? यो गम्भीर चासो र बहसको विषय हो । यसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।
नेपालको वर्तमान अवस्था धेरै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । विगतमा विस्तारवाद र प्रभुत्ववादको चर्को बिरोध गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति आस्था र विचारको लडाइ समेत छेडेका डा.बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्ति आखिर कुन शक्तिको पहल र बलमा अगाडि बढेका रहेछन् र क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि अवाञ्छित सर्तहरू स्वीकार गर्दै अपवित्र गठबन्धन गर्न किन अगाडि सारिएका रहेछन भन्ने कुरा त बिप्पा संझौता लगायतका एकपछि अर्काे प्रकरणले उदांग पार्दैआएका छन् । आत्मसमर्पणवादी चरित्रले मुलुकको स्वाभिमान बचाउन नसक्ने भएकाले नेपालको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न थालेको हो । शान्ति र संविधानको माला जप्दै अरुको बुइ चढेर सत्तारोहण गर्ने र अरुकै स्वार्थमा आफूलाई समर्पित गर्नेहरूबाट नै अहिले मुलुक सर्वाधिक जोखिमको बाटोतिर धकेलिएको छ । शान्ति र संविधानको बाटोमा अबरोध खडा गर्नेहरू पनि प्रकारान्तरले निर्देशित बाटोकै अनुयायीहरू हुन् । नेपालको राष्ट्रियतालाई धरापमा पार्ने र विघटनको संघारतिर धकेल्ने धृष्टता कठपुतली सत्ताधारीहरूबाटै हुनेगरेको छ । मुलुकको भविष्यमाथि खेलवाड गरेर सत्ता लिप्सा पूरा गर्नेहरूले यो मुलुकको कतिसम्म हुर्मत लिने हुन् ? यो नै विलय प्रसंगले उठाएको ज्वलन्त प्रश्न हो । यस्तो विलयकारी षड्यन्त्र बिरुद्ध जनताले सशक्त प्रतिरोधका लागि आफूलाई समयमै तयार पार्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
चिनीया सद्भाव प्रदर्शन (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ (01.09.2012)
स्वेच्छाचारिताको चरम नमूना (01.02.2012)
संवेदनहीनताको पराकाष्ठा (12.26.2011)